​Beentii Shalay iyo baraaruga maanta.
​Beentii Shalay iyo baraaruga maanta.
Nin odaya ayaa waxaa la yidhi wuxuu arkay dadkii degaankiisa oo duufsaday nin wadaad sheeganaya. Ninka odayga ahi ma ahayn isagu nin diinta aad u yaqaan, wuxuuse
Odaygii garashada lahaa wuxuu yidhi: Ninkan dhaqan wadaad iigama muuqdee, iska hubiya. Dadkii baa ku kacay oo qaylodhaan iyo weerar kala hor yimid, wuxuuna ku yidhi: "Markuu haweenkiina hungureeyo ee uu hablihiinna idiin weydaartaad ogaan doontaan!"
Waayo kooban ka dib waxaa dhacday in degmadii beeshu isla olkontey ay qaylodhaantu is gaadhay. Wadaadkii wuxuu noqday wabiin, nin aan waxba ka xishoon. Cabashada haweenkii ayaa is gaadhay, waxaa loo tegay garaadkii waxaana lagu yidhi; "maxaad ku aragtay wadaadka waagaad nooga digeysay?.
Siyaasigacarra edeg waxaa dadka lagu xushaa laguna taageera, waxqabadkiisa, kartidiisa, hufnaantiisa iyo hawlkarnimadiisa muuqata, haddaba bulshada Soomaaliyeed waxa ay inta badan ka siman yihiin inay qofki tanag loo garaacaba sacabka ka daba tumaan iyaga oo aan u meel dayin.
Isla markiiba waxaa ka yimid guux dhinaca baarlamaanka iyo gobollada qaarkood oo iyagu isu waday in nin degaankooda iyo beeshooda ah laga dhigo Ra’iisalwasaare, waxaa kale oo isaguna ka horyimidka biyo diidayergaygii qaramada midoobey Soomaalida u fadhiyeyAugustine Mahiga.Arrintani waxay dhalisay in dadweynuhu indhaha ku hayaan, waxaana barbar socotey laba arrimood oo uu adeegsaday Farmaajo, hadallo aan ka dhab ahayn oo uushacabka ku beerlaxawsanayeyisagoo had iyo gooraale shisheeyaha halbeegsan jirey sidoo kalena ku celcelin jirey waa in ciidamada xoogga dib loo dhiso.
Arrinka koowaad:Farmaajo wuxuu hawlgeliyey koox afmiinshaarro ah oo u sameeya halkudhegyo aan jirin, wuxuuna noqday ninkii koowaad ee si dadban uga faa’iideysta baahida danyarta barakacayaasha ah oo loo qaybin jirey lacago maalin goosad ah si ay ugu bannaan baxaan uguna qayliyaan magaciisa. Arrintan waxay soo jiidatay dad badan oo aan hoos u dareensanayn sida iyo qaabka wax u socdaan.
Arrinta labaad:wuxuu nasiib u helay in intii uu talada hayey uu soo baxay amar odhanayaa ciidamada AMISOM oo ahaa markii hore nabad ilaalin, in laga dhigo NABAD DHALIYAYAAL, oo kaarihii taagnaa uu u dhaqaaqo dhanka furinta, taasoo keentay guul kooban oo ahayd in xaafadaha qaar dib ay u soo gaalaan gacanta dowladda.
Arrinka saddexaad:Wuxuu si habsami leh dhawr bilood u siiyey bil goosadkii (Musharka) Ciidamada iyo shaqaalaha dowladda. Arrintani waxay ahayd mid wanaagsan oo sidoo kale mar labaad soo jiidatay aragtida dadka, haddana maaha mid la odhan karo waa mid ka baxsan xayndaabkii siyaasadeed ee caadiga ahaa, waayo mar walba ciidanku waa cudud aan laga maarmeyn una baahneyd in si mug leh loo haqabtiro baahidooda si dalka nabad iyo deganaanshiiyo loogu soo dabaalo.
Arrinta afraad:Waxaa lagu jujuubey ismaandhaaf siyaasadeed oo soo jiitamey ka dib inuu xilka iskaga dego, arrintan ayaa dadweynuhu waxay u arkeen nin iyaga waxtarkooda wada oo loo diiddan yahay, waana midda keentay in taageero badan uu ku kasbado iyadoo loo hiillinayo.
Waxaa dhacday waa hore in nin boqor ah nin ka mid ahaa shaqaalihiisu ka codsaday iyagoo socdaal ah inuu maalin qudha u oggolaado inuu boqornimada jillo oo iska dhigo boqorkii saxda ahaa, ka dib boqorkii waa ka oggolaaday wuxuuna yidhi hal ku dheg hirgelay oo ahaa:" Biddoow anigu ku sheegi maaye, yaan Basarkaa ku sheegin!" markii boqorkii iyo shaqaalihiisi tageen beeshii ugu horreysay ee la soo dhaweeyey, Boqorkiina dharkii shaqaalaha wato, shaqaalihiina dharkii boqorka, ayaa gacanqaadkii iyo bariidadii horeba uu hardafay ninkii shaqaalaha ahaa, dadku ugama baran habdhaqankaas boqore hoosbaa loo wada guuxay, markii la fadhiisanayeyna, iyadoon lays weydiin ayuu markuu gogoshii arkay habashaq ku yidhi, taasina dareen kale ayay keentay, markii cuntadii la keenayna iyadoon la duceysan ha la af billaabana la odhan ayuu laf la booday, dadkiibaa guuxay sidoo oo kale, waxay la yaabeen ninka dharka shaqaalaha sita hab maamuuskiisa iyo ninka dharka boqorka sita basar xumadiisa, markaasaa la yidhi, labadiinna kiinneebaa ah boqorkii saxda ahaa, halkaas ayuuna ku barriiqday biddihii waxaana sheegtey basarxumadiisa.
5.Garsoorka iyo sinnaanta
8.Bixinta bilgoosadka iyo gunnooyinka
10.Arrimaha siyaasadda gudaha iyo dibadda.
1.Xigaal ku shaqaaleysiin(Nin jeclaysi)
2.Guulwade ku shaqaaleysiin( I ammaan)
3.Eryidda shaqaale aan waxba dhimin( ima taageersana)
4.Af jigid iyo Aamuusiin(Awood sheegasho)
5.Burburinta maamullada dhisan( Kud ka guur oo qanjo u guur)
6.Kala qoqobka beelaha wada dega( isku dirka cusub)
7.Ku tagrifalka awoodda dowladda( Ardeydii kacaanka)
8.Duqaynta maatida ( Shabaab ku sheegid)
9.Aamusiinta warbaahinta( Dhaqaale ku bixin)
10.Dhiibidda ONLF( Itoobiyaan ka farxin)
Halkii roob laga sugayey ceeryaamaa ka timid. Wubaal in dadweynuhu aysan ahayn dad nugul oo wixii la rabo laga samaysan karo, balse, xaalkooda ayaa ah "Nin bukoo boqol u talisay" ilaa hadda waxay baadigoob ugu jiraan ninkii badbaadin lahaa, maalin walbananin gabbaanah jilicsan iyo mid gurracan ayay guddoonka u dhiibtaan, waa halkuu ka lahaa Abwaan Hadraawi.
·Weligeed fal baa loo guntaa, lagu guhaamaaye
·Mar uun bay gadooddaa siday, gees lo’aad tahaye
·Galab xiisaheedaa wakhtigu, kaga gaboobaaye
·Ninuun baa ku guuree iyada, geeddi waw weliye
·Marka wiil ku guro Naarta iyo, godadka Yaahuuda
·Ayay kii Jannada geyn lahaa, dayasho goobtaaye
·Marka uu galaa buu iyaga, guba yidhaahdaaye.
·Markay raar guraysaba nin bay, gudub tidhaahdaaye
·Gabno ugubi way quusisaa, gaawe Cumarowe
·Garab-daar ninkii lagu bokhraa, geedad sare waabye
·Gar-ma-qaatayaashiyo dadkaa beera, ruux gudhane
·Ganbo nimaan la soo bixin haddii, guulo lagu waabo
·Markuu dhaawac geystaba haddii, loo gargarateeyo
·Isagoo canaan lagu gudbiyo, gaarran filanaaya
·Giblo iyo haddii sacabbo lulan, loogu gogol-xaadho
·Keligii inuu guurti yahay, maalintaa gunudye